Leicester City Oo Cusbo Sii Marisay Nabaradii Arsenal Iyo Foxes Oo Guuldaro Xun Ku Sii Xumeeyay Xaaladii Unai Emery. - Gool24.Net
Leicester City Oo Cusbo Sii Marisay Nabaradii Arsenal Iyo Foxes Oo Guuldaro Xun Ku Sii Xumeeyay Xaaladii Unai Emery.
Leicester City ayaa guuldaro xun dhabarka u soo saartay Arsenal si ay xaalad murugo badan ugu abuuraan Unai Emery oo ayna kooxdiisu soo guulaysan dhamaan kulamadii ugu danbeeyay ee tartamada oo dhan.
Kooxaha Arsenal iyo Liecester City ayaan qaybtii hore ee ciyaarta wax goolal ah kala dhalin iyada oo Gunners markale ku fashilantay in ay muujiso qaab ciyaareed fiican oo ay kooxaha ay martida u tahay guul kaga gaadhi karto.
Laakiin qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Liecester City awooday in ay Arsenal ku ciqaabtay awood la’aanteeda iyada oo Foxes si buuxda u cadaysay in ay xili ciyaareedkan tahay koox ka mid ah afarta ugu sarayn kara Premier League.
Daqiiqadii 68 aad ayay kooxda Leicester City ugu danbayn jabisay ismari waagii ciyaarta waxaana goolka furitaanka ee muhiimada wayn Foxes u lahaa dhaliyay Jamie Vardy kadib markii uu caawin ka helay Tielemans.
Goolkan oo ahaa goolkii 11 aad ee uu Vardy xili ciyaareedkan ka dhaliyay premeir League ayaa noqday mid murugo badan ku abuuray Arsenal oo ku qasbanaatay in ay goolka barbaraha raadiso.
Goolka Jamie Vardy waxa uu noqday mid xaalada ciyaarta badalay isla markaana ay Leicester City kalsooni badan ku heshay waxayna bilaabeen in ay goolal kale raadsadaan halka Arsenal ayna wax jawaab ah bixin.
Daqiqiadii 75 aad xaalada Arsenal ayaa murugo iyo mid ka sii xun isku badashay kadib markii uu James Maddison kooxdiisa Liecester City u saxiixay goolka labaad ee kalsoonida isaga oo markiisa caawin ka helay Jamie Vardy oo goolka hore dhaliyay
Markii uu Emery arkay xaalada xun ee ay kooxdiisu gashay waxa uu sameeyay laba isbadal isaga oo ciyaarta soo galiyay Pepe iyo Willock isaga oo saraay Rob Holding iyo L. Torreira.
Arsenal ayaa ku fashilantay in ay xataa hal gool iska soo celiso waxayna Leicester City noqotay kooxda ayna Gunners dhaafi karin.
ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-0 ay Leicester City ugu soo awood sheegatay Arsenal waxayna Foxes ku soo laabtay kaalmaha sare ee premier League halka Gunners ay sii quusayso.